> Ungasigcina Kanjani Isikhumba Sokukhohlisa
Isikhumba se-Faux siyindlela yokubiza ebiza kancane, ehlala isikhathi eside ngokwengeziwe kunesikhumba sangempela. Isetshenziselwa ifenisha, okokugqoka, okokufaka izimoto, izikhwama, amabhande nokunye. Isikhumba se-Faux singatholakala ngezindlela ezahlukahlukene, njenge-polyurethane, i-vinyl noma i-faux suede lesikhumba. Ngayinye yalezi zindlela ingahlanzwa ngemfashini efanayo, ngokuhlukahluka okubalulekile, kuvumela ukuhlanzwa kwezinwele zezilwane, uthuli, ukungcola kanye nemvuthu. Lokhu kuzogcina izingubo zakho nefenisha yakho kubukeka kukusha isikhathi eside.
1, Faka indwangu noma isiponji emanzini bese usula ubuso bakho.
Uzofuna ukusebenzisa amanzi afudumele. Ukusula ngale ndlela kuzobamba uthuli, ukungcola kanye nenye imfucumfucu. I-Polyurethane ihlanzwa kalula kunesikhumba esivamile, futhi lokhu kwanele ukunakekelwa nsuku zonke nezindawo ezingcolile kancane
2,Sebenzisa umgoqo wensipho ebubini obuqinile.
Noma ngabe ubhekene nebala noma ukungcola okugcotshwe kuwo, amanzi alula kungenzeka anganeli. Sebenzisa insipho engenamanzi ukuqinisekisa ukuthi awekho amakhemikhali noma izinsalela ezikhona ezingathinta isikhumba. Gcoba ibha kokubi okuqinile.
Ungasebenzisa futhi insipho ewuketshezi noma i-dish yokuhlanza lesi sinyathelo
3 ，Sula noma iyiphi insipho ngendwangu emanzi.
Sula kahle kuze kube yilapho ingaphezulu selicace bha insipho. Ukushiya insipho ebusweni kungayilimaza.
4,Vumela indawo yomile.
Uma uhlanza i-athikili yengubo, ungayilengisa ukuze yome. Uma usebenza nefenisha, mane uqiniseke ukuthi akekho ohlala kuyo noma oyithintayo ize yomiswe kahle.
Ungasula ubuso bakho phansi ngendwangu eyomile ukusheshisa inqubo yokoma.
5,Futha isivikeli se-vinyl ebusweni bakho.
Le mikhiqizo isiza ukuxosha uthuli nokungcola, okwenza ukuhlanza kungabi njalo. Ngokuvamile zivikela emisebeni ye-UV. Ngemuva kokumboza indawo ngokuhlanza, sula ihlanzekile ngethawula